အတ္တကြောင့် ကြွေလွင့်ခဲ့ရသော ကျောင်းသူလေး တစ်ယောက်ရဲ့ ဖြစ်ရပ် – WunYan
အတ္တကြောင့် ကြွေလွင့်ခဲ့ရသော ကျောင်းသူလေး တစ်ယောက်ရဲ့ ဖြစ်ရပ်
ခုတော့ ဆရာမ စာသင်တော့မယ် ။ စာအုပ်ပိုင်ရှင်လည်း ပျောက်တဲ့ စာအုပ်ပြန်တွေ့ပြီဆိုတော့ ကျေနပ်လိုက်တော့ ။ အားလုံး မှတ်ထားကြပါ သူတစ်ပါးပစ္စည်း ခိုးရင် ငရဲရောက်တာနောက်မှ လက်ရှိ အချိန်မှာ ခုလို ဖမ်းမိ သွားရင် အရှက်ကွဲပြီး နှစ်ခါပြန်သေနေရတာ အတူတူပဲ။
အကျင့်ပျက်တယ် ဆိုတာ ဆရာမအတန်းထဲမှာ မရှိစေရဘူး။ ကဲ – စာသင်ရအောင် စာမျက်နှာ ၅၉ ကိုလှန် အားလုံးမြန်မြန်လုပ်ကြ ”
ကျွန်မ ကိုင်တွယ်နေသည့် အတန်းသည် ခြောက်တန်း ! တန်းခွဲ အားလုံးထဲတွင် အတော်ဆုံး အတန်းဖြစ်နေ ရမည်။ စာရိတ္တကောင်းသော ယဉ်ကျေး လိမ္မာသော စာတော်သော စည်းကမ်းရှိသော ဟူသည့် စံနမူနာများဖြင့် ပြည့်နေရမည်။
ကျွန်မလိုချင်သော ပုံစံခွက် အတိုင်း အတန်းထဲက ကလေးအားလုံးကို ပုံသွင်းထား သည်။ဒါကြောင့် ကျွန်မ အနုနည်း အကြမ်းနည်း နည်းပေါင်းများစွာ သုံးခဲ့ရသည်။ ထိုကြောင့် ကျောင်းသူ/ သား များကြားတွင် နာမည်ကျော်ကြားလေသည် ။
ဖြူစင်ရိုးသားသော ကလေးကိုမှ သူခိုးဖြစ်စေခဲ့သည်။ ဒဏ်ရာများနဲ့ အတောင်ကျိုးနေသော ငှက်ကလေးကိုမှ ရိုက်သတ်မိခဲ့သည်။ ကျွန်မအား ဆရာမလို့ခေါ်ထိုက်စရာ တစ်ကွက်မှ မရှိတော့ပါ။
သွေးစွန်းနေသော စာရွက်လေးကို တင်းတင်းဆုတ်ကိုင်ထားနေစဉ် ကျွန်မဘေးနားကို တိုးတိုးလေးကပ် လာပြောသယောင် ” သမီးကို ခွင့်မလွှတ်ပါနဲ့ သမီးမသေချင်သေးဘူး ဆရာမရယ် ” ဟူသော အသံတွေက ဆူညံပွတ်လောက်ရိုက်နေပြီး ကျောင်းသူလေးကို မျက်လုံးထဲ မြင်ယောင်ကာ ကတ္တရားလမ်းပေါ်တွင် ကျွန်မလဲကျသွားလေသည်။
ကျောင်းမပြောင်းရွေ့ရခင် နောက်ဆုံးသင်ခဲ့ရသည့်နေ့တွင် စာအုပ်ပျောက်လာတိုင်သော ကျောင်းသူလေးက သူ့အပြစ်ကို လာဝန်ခံခဲ့သည်။ သူမရဲ့ မနာလိုစိတ်ကြောင့် သေခဲ့ရသည်ဟု ရှိုက်ငိုရင်း ပြောရှာပါသည်။
အတန်းထဲတွင် လတိုင်း အဆင့် ၁ ရသော နှင်းနွယ်အောင် ကိုကြည့်မရလို့ မုန့်စားဆင်းချိန်တွင် နှင်းနွယ်အောင် လွယ်အိတ်ထဲတွင် သူမကိုယ်တိုင် သွာထည့်ထားပြီး လုပ်ကြံခဲ့တာဟု ဝန်ခံခဲ့သည်။
” သားကို ဘုန်းဘုန်းပေးထားတဲ့ စာအုပ် သာဂိ ခိုးထားတယ်။ ”
အတ်တကွောငျ့ ကွှလှေငျ့ခဲ့သော ကြောငျးသူလေး တဈယောကျရဲ့ ဖွဈရပျ
အတ်တကွောငျ့ ကွှလှေငျ့ခဲ့သော ပနျးလေးတဈပှငျ့
ခုတော့ ဆရာမ စာသငျတော့မယျ ။ စာအုပျပိုငျရှငျလညျး ပြောကျတဲ့ စာအုပျပွနျတှပွေီ့ဆိုတော့ ကနြေပျလိုကျတော့ ။ အားလုံး မှတျထားကွပါ သူတဈပါးပစ်စညျး ခိုးရငျ ငရဲရောကျတာနောကျမှ လကျရှိ အခြိနျမှာ ခုလို ဖမျးမိ သှားရငျ အရှကျကှဲပွီး နှဈခါပွနျသနေရေတာ အတူတူပဲ။
အကငျြ့ပကျြတယျ ဆိုတာ ဆရာမအတနျးထဲမှာ မရှိစရေဘူး။ ကဲ – စာသငျရအောငျ စာမကျြနှာ ၅၉ ကိုလှနျ အားလုံးမွနျမွနျလုပျကွ ”
ကြှနျမ ကိုငျတှယျနသေညျ့ အတနျးသညျ ခွောကျတနျး ! တနျးခှဲ အားလုံးထဲတှငျ အတျောဆုံး အတနျးဖွဈနေ ရမညျ။ စာရိတ်တကောငျးသော ယဉျကြေး လိမ်မာသော စာတျောသော စညျးကမျးရှိသော ဟူသညျ့ စံနမူနာမြားဖွငျ့ ပွညျ့နရေမညျ။
ကြှနျမလိုခငျြသော ပုံစံခှကျ အတိုငျး အတနျးထဲက ကလေးအားလုံးကို ပုံသှငျးထား သညျ။ဒါကွောငျ့ ကြှနျမ အနုနညျး အကွမျးနညျး နညျးပေါငျးမြားစှာ သုံးခဲ့ရသညျ။ ထိုကွောငျ့ ကြောငျးသူ/ သား မြားကွားတှငျ နာမညျကြျောကွားလသေညျ ။
ဖွူစငျရိုးသားသော ကလေးကိုမှ သူခိုးဖွဈစခေဲ့သညျ။ ဒဏျရာမြားနဲ့ အတောငျကြိုးနသေော ငှကျကလေးကိုမှ ရိုကျသတျမိခဲ့သညျ။ ကြှနျမအား ဆရာမလို့ချေါထိုကျစရာ တဈကှကျမှ မရှိတော့ပါ။
သှေးစှနျးနသေော စာရှကျလေးကို တငျးတငျးဆုတျကိုငျထားနစေဉျ ကြှနျမဘေးနားကို တိုးတိုးလေးကပျ လာပွောသယောငျ ” သမီးကို ခှငျ့မလှတျပါနဲ့ သမီးမသခေငျြသေးဘူး ဆရာမရယျ ” ဟူသော အသံတှကေ ဆူညံပှတျလောကျရိုကျနပွေီး ကြောငျးသူလေးကို မကျြလုံးထဲ မွငျယောငျကာ ကတ်တရားလမျးပျေါတှငျ ကြှနျမလဲကသြှားလသေညျ။
ကြောငျးမပွောငျးရှရေ့ခငျ နောကျဆုံးသငျခဲ့ရသညျ့နတှေ့ငျ စာအုပျပြောကျလာတိုငျသော ကြောငျးသူလေးက သူ့အပွဈကို လာဝနျခံခဲ့သညျ။ သူမရဲ့ မနာလိုစိတျကွောငျ့ သခေဲ့ရသညျဟု ရှိုကျငိုရငျး ပွောရှာပါသညျ။
အတနျးထဲတှငျ လတိုငျး အဆငျ့ ၁ ရသော နှငျးနှယျအောငျ ကိုကွညျ့မရလို့ မုနျ့စားဆငျးခြိနျတှငျ နှငျးနှယျအောငျ လှယျအိတျထဲတှငျ သူမကိုယျတိုငျ သှာထညျ့ထားပွီး လုပျကွံခဲ့တာဟု ဝနျခံခဲ့သညျ။
” သားကို ဘုနျးဘုနျးပေးထားတဲ့ စာအုပျ သာဂိ ခိုးထားတယျ။ ”